दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउने कम्पनीलाई कारबाही ! - Sagarmatha TV
दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउने कम्पनीलाई कारबाही !
काठमाडौं, ३ जेठ । कतार सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र महिना रमजानमा दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउने रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले ६ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउने रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी दिन अनुरोध गर्दै त्यस्तो पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । आजको कान्तिपुरले पृष्ठ २ मा यो समाचार छापेको छ ।
कतारमा झन्डै ४४ हजार कम्पनीमा २३ लाख आप्रवासी कामदार छन् । ती मध्ये चार लाख नेपाली छन् । इस्लामिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार बिहीबरबाट रमजान सुरु हुँदैछ ।